Ngokwezibalo, minyaka yonke siyanda isibalo abantu abakhubazekile noma izinguquko zentuthuko. Ucwaningo kulesi sigaba sama-abantu behileleka imfundo ekhethekile, okuyinto ingenye izindawo yokufundisa isayensi. Ngenxa yakhe, kwamangqamuzana yentuthuko okungafanele evamile, nezindlela kungakanani abakwaziyo kanye nokuhlola izinhlelo zokuhlumelelisa izimilo, kuncike izimiso ezithile, ezifana indlela olunzulu ukuze inkinga, ucwaningo ephelele Dynamics.
Umlando wemfundo ekhethekile ihlobene eduze ngentuthuko ukuthuthukiswa neminye imikhakha yesayensi. Ekuqaleni, wayesondelene ngendlela isayensi ehlukile. ESoviet Union ithole umfutho ekuthuthukisweni ngaphakathi kohlaka pedology, okwathi ngokuhamba kwesikhathi ivalwa (mhlawumbe abanye nezwa ukuthusa ngesikhathi umthetho "Ngo Pedological kwaseSodoma ku Yabantu Commissariat kohlelo", ngenxa okuyinto kuze kube iminyaka 60 zokugcina Psychology ekhulwini isayensi wasala ithunzi). Kwaphela isikhathi eside imfundo olukhethekile defectology lahlotshaniswa. Manje ama-apharathasi categorical isayensi esicishe okulingana imigomo asetshenziswa kwengqondo. Ngaphezu kwalokho, kusukela umkhuba ngamazwe inamathela ukubaluleka okukhulu esintwini nekhono lokungacasuli, imigomo kumele isetshenziswe ngendlela efanele, ngaphandle deadlights enamathiselwe "izinqamuleli." Kulesi sigaba khona, a ekhethekile pedagogy njengoba isayensi eseke izincazelo zayo, kancane kancane esikhundleni sazo imiqondo categorical khulu lathathwa amagama wezokwelapha. Ukwephulwa kwesimilo ezibhekwa futhi kutfola inshokutsi zazo - ukulungiswa womuntu kanye nezimfanelo zayo, ngoba ngamunye uhlukile empeleni yayo, kanye nokuthuthukiswa eyodwa akafani lokukhula lalezi ezinye, njengoba nje kungekho kwesokudla nokuthuthukiswa okungalungile. Ngokusho kwale sayensi, oyedwa kuphela ahlinzekwa yiluphi uhlobo losizo (ngokwengqondo, ezempilo, njll), hhayi okudinga ukulungiswa.
Special zasenkulisa pedagogy ingenye izingxenye zale isayensi. Akusiyo imfihlo ukuthi senzeka ebuntwaneni ukuhlonza yemihlobo ehlukeneko amaphutha. Ngenxa ukuthola esifike ngesikhathi futhi ukulandela ngomkhondo pre-school izingane kanye nokuthuthukiswa normal, lithathelwe yabo emphakathini lula kakhulu, zinikeza usizo oluthile, kunqunywa izindlela zokwelashwa compensatory.
Ezweni lethu, kukhona izinhlobo eziningana futhi izinhlobo izikhungo zemfundo. Lawa ezikoleni ezikhethekile, amakilasi, amaqembu kahle, ongaboni kahle, ngokuba abagula ngengqondo, abantu nge retardation engqondo, labo iziyaluyalu of the system zemisipha. Incazelo wengane leso sikhungo kwenzeka kuphela ngesinqumo PMPC.
Abanye abazali bayenqaba izakhiwo ahlinzekwa, ukuthi kuyize. Basiza ingane kuvela ukuthi eziyinkimbinkimbi, ikhumbula yobudala nangobuntu bakhe izici. Njengomthetho, lezi zigaba noma amaqembu zinabantu inombolo encane abafundi nabafundi. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukuba acabangele izici ngamunye, futhi ukunikeza usizo olufanele kanye nokwesekwa.
imfundo Special abutholakali ukusebenza nezingane. Njengoba isikhathi sihamba, bekhula, futhi zisekhona izinselele, ngisho noma enjalo emhlabeni wonke, njengoba ayenjalo. Nobudlelwano futhi ukuthola niche yabo emphakathini, babasize amakhono wafunda nge ukuqeqeshwa ne Ochwepheshe ezihlukahlukene.
Rainy nezinkathi ezomile: lapho ukuya Thailand